शिल्पकारिता - एक होवरकम्प छनौट - प्रतिक्रिया विश्वभरि सुरक्षा समाधानहरू
घर हव पोड बारेमा शिल्पकारिता - एक होवरक्राफ्ट छनौट गर्नुहोस्
Hov Pod Hovercraft शिल्पमूर्ति
जब तपाइँसँग धेरै मुद्दाहरू छन् हॉवरक्राफ्ट विमान चयन गर्दा महत्त्वपूर्ण छन्। सुरक्षा र स्थायित्व महत्वपूर्ण छ तर यति धेरै अन्य कारकहरू छन् र हभ पोडलाई सानो र मध्यम कर्तव्यको लागि व्यावसायिक र मनोरञ्जन प्रयोगको लागि होभरकम्प किन्नको लागि डिजाइन गरिएको थियो, उनीहरूलाई प्रयोग गर्न सजिलो, सेवा गर्न सजिलो, ढुवानी गर्न सजिलो हुन्छ।
हव पोड डिजाइन गरिएको कारणहरू किन सुरक्षित छन् र टिकाऊ हाम्रो खरीददारहरूको गाइडमा ढाकिएको छ, तर यसले दुर्घटनाको कारणले गर्दा यसले शिल्पको पछि लाग्न सक्छ र यो कसरी डिजाइन र परीक्षणबाट प्रक्रिया देख्न सञ्चालन गर्दछ। को माध्यम ले पैकिंग र शिपिंग, घडी customer service essay prednisone and allergies viagra uk supplier http://technology.swbts.edu/faculty/essay-definition-success/18/ essay reworder enemy movie reviewВ https://nyusternldp.blogs.stern.nyu.edu/college-essay-about-self-worth/ brainfuse अनलाईन होमवर्क मद्दत लिंक प्राप्त गर्नुहोस् impotence treatments viagra oh no i forgot to write my essay how to edit autofill email on iphone स्रोत url creatingapaper outline sample case study ofacompany स्रोत dauer einer viagra pille घडी लागूपदार्थको दुरुपयोग अनुसन्धान कागज can viagra be cut in half thesis editing services sydney लिंक प्राप्त गर्नुहोस् custom essays buy one get one free https://pacificainexile.org/students/business-management-term-paper/10/ buy book review online https://vaccinateindiana.org/side-effects-of-indian-viagra-15214/ https://eagfwc.org/men/best-viagra-cialis-levitra/100/ https://grad.cochise.edu/college/buy-essay-online-for-cheap/20/ http://www.conn29th.org/university/official-paper.htm https://www.nationalautismcenter.org/letter/writing-business-plan/26/ how to write an audit report हामी कसरी हव पोड निर्माण गर्छौं यसलाई राम्रो र मध्यम कर्तव्यलाई व्यावसायिक र मनोरञ्जन होभरक्राफ्ट उपलब्ध गराउनुहोस्।
डिजाइन र परीक्षण
पार्ट्सलाई 3D कम्प्यूटर एडेड डिज़ाइन (सीएडी) को प्रयोग गरी बनाइएको सहि tolerances को प्रयोग गरी डिजाइन गरिएको छ। यो सफ्टवेयरले पनि चित्रहरू वा डेटा फाइल उत्पन्न गर्दछ जुन कुन भागहरू निर्मित वा सीधै मेटिने छन्। रेखाचित्र वा डेटा फाईलहरूको प्रयोगले निर्माण चरणको समयमा अवयव र घटक नियन्त्रण गर्दछ।
यो 3D सफ्टवेयर डिजाइन को एक पूर्ण विश्लेषण को अनुमति दी शिल्प र अन्तरक्रिया घटकको विधान।
डिजाइन समुद्री समुद्री सुरक्षा मा विचार गर्नु पर्छ र होवरकम्प को नुन को पानी को स्थिति को सामना गर्न को लागि डिजाइन गरिएको हुनुपर्छ। हाउ पोड को लोड गर्न को लागी फ्लुड ब्रोयसी परीक्षण को लागी आयोजित गरियो। धेरै होभरक्राफ्ट निर्माताले यो वा चिन्तालाई डिजाइनर चरणको दौडान यो पहललाई बेवास्ता गर्दछ सबै आशा राम्रो हुनेछ। हनो पोड हल्कको पालीथाइलन फोम कोरले सुनिश्चित गर्दछ कि एचओओ पोडले सुरक्षाको उच्च कारक संग सीटमा सम्भव भन्दा बढी प्वाइलोडको साथ फ्लोट गर्न सक्छ।
भाग चयन र अवयव निर्माण
CAD रेखाचित्रबाट, घटक कम्प्यूटर संख्यात्मक नियन्त्रण उपकरण (सीएनसी) प्रयोग गरी निर्मित गरिन्छ। एकपटक सेटअप गरेमा, यी मशीनहरू म्यानुअल हस्तक्षेप बिना घटक निर्माण गर्दछ, त्यसैले कम्प्युटर नियन्त्रणले दोहोर्याउने र धेरै सही घटक निर्माण गर्दछ, एक राम्रो होभरक्राफ्टको उत्पादन गर्न।
दाँयामा ड्राइव घटक एल्युमिनियम (एक एल्युमिनियम को एक ठोस टुक्रा) बाट मशीनीकृत हुन्छ जबकि बायाँ मा ड्राइव घटक एक ढाला वाला कास्टिंग हो। धातुको एकल बिललेटबाट मशीनिंग एक बढी महँगा प्रक्रिया हो तर ढोकाहरू वा दरबारहरूको खतरा बिना टाढा भन्दा राम्रो भागहरू उत्पन्न गर्दछ। लगभग विशिष्ट रूपमा सबै हव पोड धातु ड्राइव भागहरू यस विधिद्वारा निर्मित गरिन्छ। होभ पोडका लागि धेरै घटकहरू पुन: डिजाइन गर्न आवश्यक थियो किनकि बन्द-स-शेफ आपूर्ति घटकहरू असफलता वा भाग विफलताको लागि फेला परेन। सीएनसी मशीनिंग को लाभ यो छ कि धेरै सटीक भागहरु को उत्पादन गर्न सकिन्छ कोषलाई सही उच्च सटीक ईन्जिनियरिङ् tolerances को साथ एक साथ फिट सुनिश्चित गर्न।
निर्माणको प्रतिकृति सुनिश्चित गर्नको लागि जिग्स र टेम्प्लेटहरू प्रयोग गरी अन्य घटकहरूमा अन्य घटकहरू बनाइएका छन्। होभ पोड पार्ट्स उप ठेकेदार बाहिर छन्, यो अधिक महंगी छ, तर भागहरु को क्षेत्र मा नियंत्रित क्षेत्र को तहत बनाइयो आफ्नो क्षेत्र मा विशेषज्ञहरु द्वारा।
एक होवरक्राफ्ट छान्नु भएको बेला, कहिलेकाँही तपाईले नराम्रो मैदानमा भाग लिन सक्नुहुन्छ। हव पोड SPX निर्मित निर्मित उछाल समग्र पत्र संग उच्च प्रभाव पलिथाइल प्रयोग गरेर निर्मित गरिएको छ। गिलास फाइबरको विपरीत, उच्च असर पीई पर्याप्त दस्तकहरू सामना गर्न सक्छन्; the सामाग्री F1 रेसिङ क्र्यास बाधाहरु को उत्पादन मा प्रयोग गरिएको छ। चित्रले एयर फिड होलहरू देखाउँदछ जसले हवाईलाई खपतको पछाडि हावा गर्न अनुमति दिन खण्डित स्कर्टमा फीड गर्न अनुमति दिन्छ। अगाडिल्लो र पछि एल्युमिनियम प्रभाव प्लेटहरू, अतिरिक्त बोल्ट र भारी-कर्तव्य एल्युमिनियम धावकहरूबाट अतिरिक्त उल्टो सुरक्षा हेर्नुहोस्।
कुञ्जी इन्जिन भागहरूले हामीलाई विधानसभा / परीक्षण र शिपिंग गर्नु रोबोटिक रूपमा बनायो।
धेरै रंगहरू एक मानकीकृत उत्पादन प्रक्रियाबाट उपलब्ध छन्। हामी अब यो ग्लास फाइबर (एचआरपी) बाट होभ पोड हल्स निर्माण गर्न सक्दैनौं किनभने यस सामग्रीले सबै भू-भाग प्रयोगको लागि भंगुर साबित गर्यो। HDPE एक उच्च प्रभाव सामग्री हो, जस्तै अतीतमा प्रयोग गरिएको F1 क्र्यास बाधाहरू र कृत्रिम जोडीहरूको उत्पादनको लागि। यो हल्का हल्का र धेरै प्रलोभन, लगभग अविनाशकारी, होभरकम्पान निर्माणको लागि यति उत्तम छ।
गुणवत्ता प्रणालीमा अर्डर र सामान
स्टक नियन्त्रण प्रणालीले स्वचालित रूपमा आदेशहरूलाई ट्रिगर गर्दछ जुन त्यसपछि आपूर्तिकर्ताहरूको मूल्याङ्कन गर्न मानिएको मानकीकृत नियन्त्रण प्रक्रियाहरू प्रयोग गरी राखिएको छ। अर्डर फारमहरू प्रत्येक आपूर्तिकर्तासँग जोडिएको एक संशोधन नियन्त्रण प्रणाली प्रयोग गरेर सही घटक आपूर्ति सुनिश्चित गर्नका लागि लिंक गरिएको छ।
कारखानाका भागहरूमा रसिदमा सामानहरू यसको निरीक्षण प्रक्रियाको माध्यमबाट प्राप्त भएमा उनीहरूले गुणस्तरको गुणवत्ता रिपोर्टहरू अनुरूप छन्।
भण्डार र स्टक प्रणाली
क्राफ्ट रङहरूको दायरामा बनाइयो र निर्माण अनुकूलनको लागि भण्डारण गरिएको छ।
एक भाग नियन्त्रण प्रणालीले धेरै सँगी भागहरू एक अद्वितीय संख्या दिन्छ, जसले यसको निर्माणको तरिकालाई पहिचान गर्दछ र यसको लागि प्रयोग गरिन्छ। खण्डहरू पछाडि राखिएको र गणना गरिएको स्टक बिन प्रणालीमा भण्डारण गरिएको छ।
पार्टनरहरू अन्तिम उत्पादन लाइनमा भेला हुन तयार भएका पूर्ण उप विधानहरूको एक दायरामा बनाइन्छ।
हल्स तयार छन्। हावा फिड छेदहरू काटिएका छन् र पहिरन प्लेटहरू र प्रभाव प्लेटहरू थप लगाउन तल र प्रभाव सुरक्षा दिन थपिएका छन्। स्केड्स र पहिरन प्लेट्स सजिलै संग बदलेका छन् अझै SPX हिल प्राकृतिक शक्ति को अतिरिक्त पर्याप्त अतिरिक्त प्रभाव संरक्षण प्रदान गर्दछ।
ब्याच उत्पादन विधिहरूको लागि अन्य उप संकलनहरू तयार छन्।
इन्जिनहरू स्थापना र अन्तिम परीक्षण भन्दा पहिले बनाइएका छन्।
ह्वा पोडमा 65 खण्ड स्कर्ट सेक्शन छ जुन क्षति कम गर्न को लागी स्कर्ट हर रोज पहनने र आंसू को क्षतिग्रस्त हुनु पर्छ। चार प्रकार, ए, बी, सी र डी टाइप स्कर्टहरू छन्, प्रत्येक आकारले हव पोड यो अनूठो हैंडलिंग विशेषताहरू प्रदान गर्न विभिन्न तरिकामा हवा नियन्त्रण गर्दछ। तिनीहरू शिल्पको वरिपरि बम्पर पट्टीमा पट्टिन्छन्। परीक्षणमा कुनै शरीरले स्कर्ट कपडाको टुक्रा निकाल्न सकेन वा .........। यद्यपि यदि हामी कपडा मा कटौती गरेर शुरू गर्न को लागि तिनीहरूलाई बाहिर बाहिर।
हामी प्रत्येक स्कर्टको तलबाट2केबल सम्बन्धसँग जोड्दछौं। यो हो कि हव पोड होवरले बाधालाई रोक्न सक्छ जुन स्कर्टलाई क्षति पार्न सक्दछ, केबल टाई पहिलो तोड्न डिजाइन गरिएको छ, यस प्रकार स्कर्टको साथ बलिदान सम्बन्धी सम्बन्ध, क्षति र परिचालन लागत कम गर्न। एक स्कर्ट को प्रतिस्थापन को आवश्यकता हो, एक स्कर्ट सेक्शन को प्रतिस्थापन को आसान हो र पुरा होवरक्राफ्ट स्कर्ट को प्रतिस्थापन को सस्ता सस्ता छ।
विधानसभा लाइन प्रक्रिया कम्प्यूटरीकृत निर्माण प्रणाली मार्फत नियन्त्रण गरिन्छ, जो हरेक पहलू को शिल्प विधान प्रक्रिया को दस्तावेज गर्दछ।
ग्यारेन्सी प्यानल कन्फ्लेक्स कन्सोल पछि अवस्थित इन्टरप्राइजेज गेजहरूको साथ ह्यान्डबार स्ट्रिङ र थ्रोटल देखाउँदा गेज नियन्त्रण प्यानल। यो पनि देखाइएको छ कि अगाडि भण्डारण लककर्ता र हटाउन सकिने अगाडि सिट पेय र उपकरण भण्डारण ट्रेमा ड्रपमा पहुँच दिन।
इन्जिन अन्तिम रन अप र परीक्षणको लागी तयार छ।
रडर्स, रियर पहुँच प्यानल र रियर गार्ड (हामी बुझ्दछौँ कि हामी एक रियर गार्ड फिट गर्न को लागी मात्र एकमात्र आपूर्तिकर्ता हो जुन हामी सामान्यतया सामान्यतया सामान्यतया मान्दछौं)।
ककपिट ह्याङ्ग ह्यान्डलहरू देखाउँदै, असबाबवाला सीटहरू, र सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रियहरू। केहि होभरक्राफ्ट निर्माताहरूले सुरक्षा इन्टरलिङहरू फिट गर्न वा कोर्ड सुरक्षा इञ्जिन कट-आउट स्विचहरू हराउन असफल हुन्छन् - हामी जान्दछौं कि यी विशेषताहरूले निर्दिष्ट / फिट गर्न बढी समय र पैसा खर्च गर्छन्, तर हामी हाम्रो ग्राहकको सुरक्षा सम्झौता गर्न छनौट गर्दैनौं।
शिफ्ट शिपिंगको लागि ग्राहक विवरणहरूसँग लेबल गरिएको।
पूर्व डेलिभरी निरीक्षण, म्यानुअल्स र निर्देशन
पूर्व डिलीवरी निरीक्षण र साइन अप। अन्तिम सफ्ट, शिपिंगको लागि तयारी र कुञ्जी विधान विन्दुहरूमार्फत डबल जाँच गर्नुहोस्।
प्रत्येक शिल्प पूर्ण म्यानुअल विवरण निर्धारण र तयारीको साथ पठाइएको छ। थप जानकारी पानाहरू व्यापक इन्जिन मैनुअलहरूसँग आपूर्ति गरिन्छ।
ढुवानी, प्याकिङ, डिलिवरी र पोष्ट वितरण
शिल्प युनिभर्सिटीमा एक विशेषज्ञ प्याकर र स्यान्डर्स द्वारा संभाला र लक्जरी माल को विश्वव्यापी शिपिंग को नियंत्रित गर्न को लागी जटिलताहरुमा प्रयोग गरे।
आपदा राहत क्षेत्रको लागि तत्काल वायुफ्रेट को लागी शिल्प तैयार गरियो।
हव पोड होभरक्राफ्टलाई ड्राइभ र सेवा गर्न सजिलो छ, यसका लागि म्यानुअलहरू प्रमुख शीर्षकहरू समाविष्कार गरिएका तकनीकी सूचना पत्रहरू उपलब्ध छन्। हामी 1 बाट3दिनको अवधिमा एक विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान गर्दछौं र तयारी, ड्राइभिङ्ग, सेवा र रखरखावको सबै पक्षहरू लुकाउँछौं।
Hov Pod धेरै रमाइलो हुन्छन्, र हामी संसारभरका ग्राहकहरु बाट छविहरू प्राप्त गर्न पाउँदछौं, 45 माइल सम्मको गतिमा हावाको तकियामा यात्रामा रोमांचको अनुभव गर्दै। हॉवरक्राफ्टका लागि धेरै व्यवसायिक प्रयोगहरू छन् र हभ पोड प्रायः उद्धार कार्य, व्यावसायिक सर्वेक्षण, तेल अन्वेषण र पुग्ने क्षेत्रहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ जुन अन्य सवारी साधन पुग्न सक्दैनन्।
हामी हाम्रो शिल्पमा गर्व गर्छौं
राम्रो सुरक्षा डिजाइन कुनै दुर्घटना छैन; व्यापक विकास होभ पोड डिजाइन गर्न गएको छ। एक होवरक्राफ्ट छान्दा, सुरक्षाको डिजाइनको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, र हाम्रा डिजाइनरहरू अन्य शिल्पमा फेला परेका थुप्रै कारकहरू छन्। उदाहरणका लागि, हामी फ्यान विधानसभाको सामने र पछिल्ला रक्षकहरू संरक्षक छौं - कसले उनीहरूको दाहिने मनमा हुँदैन? (वास्तवमा, hovercraft को बहुमत छैन)।
सबभन्दा ठुलो बिहान पनि सुरू गर्न को लागी भारी शुल्क सील ब्याटरहरुमा विचार गर्नुहोस्। केही शिल्पले एउटै डिब्बेमा इलेक्ट्रोनिक र ईन्धन राख्यो! केहि सरल खुला बिजुली कनेक्शन प्रयोग गर्दछ। कसैलाई कुनै पनि आधिकारिक सुरक्षा अनुमोदन बिना आफ्नै ईन्धन ट्यांक लगाईएको छ! हामी सीडीएड डिजाईन र सीएनसी बिललेट निर्माण को उपयोग गर्छन किनकि भागहरु को दोहराने वाला डिजाइन, उच्च गुणवत्ता र उपयोग मा मजबूत छ। फेरि Hov पोड पूर्ण स्वतंत्र सरकारी ईन्जिनियरिङ्, सुरक्षा र अपरेसन प्रमाणीकरण मार्फत आएको छ।